Deepin 15.11 ichatibvumidza kuyananisa zvigadziriso zvedu mugore | Linux Vakapindwa muropa
Deepin 15.11, ikozvino yavapo, ichatibvumidza kuyananisa zvigadziriso zvedu mugore nekuda kweCloud Sync
Mwedzi mitatu mushure mekutanga kweiyo previous version, kupera kwevhiki uku kwakange kuri kuvhurwa Deepin 15.11, vhezheni nyowani yavanovimbisa ichapa chiitiko chakagadziridzwa uye chakatsetseka Kunyangwe yaive mune yapfuura vhezheni apo runyorwa rwakawandisa uye runotyisa rwemashoko rwakaverengerwa, iyo vhezheni nyowani inosanganisirawo nhau dzinonakidza, senge izvo izvo zvino iyo inoshanda sisitimu yefaira maneja inotsigira kunyora data kune disks yakananga kubva kuDefin File Manager.
Deepin chirongwa chekushandisa chakagadzirwa nekambani yeChinese ine zita rimwe chete. Yakagadziriswa kunyanya kune vashandisi veChinese, Deepin inoshandisa yayo yakajeka mifananidzo, yakatumidzwa zita rehurongwa hwekushanda uye nekambani inosimudzira, iyo munhu wese anoiyedza anoifarira zvakanyanya. Chimiro chayo chinotaridzika kunge muchinjikwa pakati pekutanga OS, KDE Plasma (inonyatsoshandisa iyo Kwin windows maneja) uye Xfce, kunyange hazvo zvimwe zvinhu zvinoonekwa kurudyi zvichitiyeuchidza zvishoma nezveBudgie Desktop. Pamwe, kuunganidza izvo zvakanaka zveanoverengeka anoshanda masisitimu ane chekuita nezvakanaka zvirevo izvo Deepin Linux inogamuchira.
Chii chitsva muDepin 15.11
"Cloud Sync" sarudzo yakasanganiswa muDhivha Center chishandiso Iyi sarudzo ichatibvumidza kuyananisa masystem ehurongwa mugore, iro rinosanganisira network, kurira, mbeva, manejimendi emagetsi, makona, dingindira, Wallpaper, launcher uye dock maseteki. Parizvino inongowanikwa muChina.
Deepin's maneja wefaira ikozvino anotendera kunyora imwe dhata kuma diski zvakananga pasina kuenda kuburikidza nemidziyo yakaita seGparted.
Chinongedzo chakawedzerwa kuratidza nzvimbo yemahara pamadhisiki.
Deepin Moovie ikozvino inotsigira .srt zvinyorwa zvinyorwa. Isu tinongofanirwa kudhonza iyo .srt faira kune iyo yekushandisa hwindo kana vhidhiyo irikutamba kuti iite ivo.
Iyo bhatiri icon padoko inoratidza bhatiri kugona uye yasara nguva.
Deepin Terminal ikozvino inotsigira zvakasarudzika kumashure uye inowedzera imwe sarudzo yekufambisa iyo bha yemusoro kuzasi kwechiso.
Kugadziridza kana uchifambisa windows kana uchishandisa Deepin pane chishandiso chine chekubata
Pasina kupokana, ruzivo rwakatanhamara ndirwo rwunokutendera kuti uwiriranise marongero ari mugore, kana zvirinani ndozvandinozviona. Kana tangoponeswa, kudzoreredza kumwe kwekutanga shanduko dzatinoita kuhurongwa hwekushandisa zvichave zvakangobaya zvishoma, zvichitiponesa nguva nesimba. Kana iwe uchifarira kuyedza Cloud Kubvumirana uye mamwe mabasa ese, unogona kurodha pasi Deepin 15.11 kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Deepin 15.11, ikozvino yavapo, ichatibvumidza kuyananisa zvigadziriso zvedu mugore nekuda kweCloud Sync
Pasina kufuratira hunhu hwayo, ini handidi kugoverwa uku nekuti inoshandisa yakawanda software yekudyara, iyo ini yandinoona kupokana maererano. Gnu Linux yakagadzirwa zvichibva pasoftware yemahara uye ndiyo huru uzivi. Zvinonzwisisika kuti software yemidziyo inoshandiswa kana pasina imwe sarudzo musoftware yemahara, zvisinei izvi hazviitike muDepin iyo inoshandisa Chrome, hofisi yeWPS nevamwe.
Ubisoft uye EPIC Mitambo ichatanga kushandisa iyo Blender chishandiso chezvavanogadzira